Shirka Madasha Wadatashiga Qaran oo si rasmi ah kaga furmay Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Shirka Madasha Wada Tashiga Qaran ee geeddi socodka hanaanka doorashooyinka sanadkan 2016 ayaa goor dhow ka furmay magaalada Kismaayo, iyadoo shirkan afartii maalmood ee la soo dhaafay uu dib u dhac ku imaanayay.
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa u mahadceliyay Maamulka Jubbaland oo sheegay inuu ku marti qaaday meel qurux badan oo ammaan ah, waxaana uu sheegay ujeedka shirka inay tahay in Somali ay guul gaarto.
Madaxweynaha wuxuu sheegay shalay inay u baahnaayen taageerada Beesha caalamka, maantana ay u baahan yihiin, wuxuuna sheegay farxada Beesha caalamka inay tahay horay u socodka Somaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dalbaday shacabka Somaliyed inay ku kalsoonaadaan Madaxdooda oo tallada dalka haysa wuxuuna tilmaamay in Madaxda ay ku dhaarteen Kitaabka Qur’aanka Kariimka, sidaasina ay wanaagsan tahay tallada ay u dhaarteen in loogu aamino.
Ergooyinka rasmiga ah ee shirka maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socdo la xareeyo